Zaw Naung Linn
နယ်တကာလှည့်ပြီး သတင်းယူရဲတယ်ကွ ဆိုပြီး အင်တာဗျူးတွေ ချိတ်လာတာ၊ ရှင်းတယ်နော် ကျွန်တော်ပြောတာ၊ ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီ မှလည်း မကြောက်ဘူး။ ကျွန်တော် အခုမှ ဒီ စကား စပြော တာပဲ။ စာနယ်ဇင်းသမားဆိုတာ ကိုယ်အမြင်မကြည်တဲ့ကောင် တွယ်မှာပဲ။ ပါးစပ်နဲ့ တွယ်လို့ မရရင် ဂျာနယ်ထဲထည့်မှာပဲ။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီလိုပဲ ကျင့်သုံးနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ကောင်ဆိုရင် သွား မင်း ဂျာနယ်ထဲမှာသေ။ ငါတို့ ဂျာနယ်ထွက်ရင် မင်းသေပြီမှတ်၊ ဒါပဲ ... ... ရေးခွင့်ရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ရေးတယ် ။ကျွန်တော်တို့ ဂျာနယ်က ခက်ခက်ခဲခဲ နဲ့ အောင်မြင်ပြီး နေရာရလာတာ။ ခင်ဗျားတို့ ဘုဂလန့်မပြောနဲ့ ၊ပြောရင် ခင်ဗျားတို့အတွက် တစ်ပြားမှကောင်းတာရေးမပေးဘူး။ တိုင်ချင်တဲ့နေရာတိုင်လို့ ရတယ်။
ဘာ နိုင်ငံရေးသမားကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ မှတ်ထားကြ။ ကျွန်တော့်နာမည် ဇော်နောင်လင်း၊ ဇော်နောင်လင်း ဆိုပြီး နယ်တကာလှည့်ပြီး သတင်းယူရဲတယ်ကွဆိုပြီး အင်တာဗျူးတွေချိတ်လာတာ၊ ရှင်းတယ်နော် ကျွန်တော်ပြောတာ၊ ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီမှလည်း မကြောက်ဘူး။ ကျွန်တော်အခု
မှ ဒီစကား စပြောတာပဲ။ စာနယ်ဇင်းသမားဆိုတာ ကိုယ်အမြင်မကြည်တဲ့ကောင် တွယ်မှာပဲ။ ပါးစပ်နဲ့ တွယ်လို့မရရင် ဂျာနယ်ထဲထည့်မှာပဲ။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီလိုပဲ ကျင့်သုံးနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ကောင်ဆိုရင် သွား မင်းဂျာနယ်ထဲမှာသေ။ ငါတို့ဂျာနယ်ထွက်ရင် မင်းသေပြီမှတ်၊ ဒါပဲ ... ... ရေးခွင့်ရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ရေးတယ် ။ကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်က ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ အောင်မြင်ပြီး နေရာရလာတာ။ ခင်ဗျားတို့ ဘုဂလန့်မပြောနဲ့ ၊ပြောရင် ခင်ဗျားတို့အတွက် တစ်ပြားမှကောင်းတာရေးမပေးဘူး။ တိုင်ချင်တဲ့နေရာတိုင်လို့ ရတယ်။ တိုင်ရင်လည်း ကျွန်တော်ရေးတာမဟုတ်လို့ပါ ပြောလိုက်ရုံပဲ ရှင်းတယ်နော် ...။
[Unity Weekly News ဂျာနယ်ပါ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်၏ မိန့်ခွန်းကို ကိုးကားပါသည်။]
(( Moe Zay Nyein ))
ပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြောက်တာမဟုတ်လို့ ပြည်သူကို မလေးစားတာ ကတော့ ပြောစရာ မရှိဘူးဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့က လက်သင့်ရာ စားတော်ခေါ်လို့ ၀န်ကြီးဖြစ် လာတဲ့ သူတွေလေ။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းရှိတာမှ မဟုတ်တာဗျာ။ ဒါပေသိ အဲဒလို ကိုယ်ပလတ်ကျွတ်၊ ခဲလွတ်နေတာကို လူသိအောင် ချချပြနေတာကတော့ ရှက်စရာကောင်းတယ်ဗျ။ ၂၉ က ပုဂ္ဂိုလ် က ခွေးစကားပြောတယ်။ ၃၃ က အမတ်က ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘ၀င်မြင့်တယ်။ ခု ၁၇ က လူက လူမိုက် စကားပြောတယ်။ ရှက်တတ်ရင်တော့ ရှက်စရာကြီးပါဗျာ။ ရှက်ကြပါ။
မွေးရေ၀န်ကြီး အုန်းမြင့်၏ အကောင့်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်၏ မကွေးတိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သော မှတ်သားဖွယ် စကားမှ ကောက်နှုတ်ချက်များ ....
" ဘာနိုင်ငံရေးသမားကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ မှတ်ထားကြ။ ကျွန်တော့်နာမည် ဗိုလ်ချုပ် အုန်းမြင့်။ ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့်ဆိုပြီး နယ်တစ်ခါ (နယ်တကာ) လှည့်ပြီး ပါးရိုက်ရဲ တယ်ကွဆိုပြီး မိန့်ခွန်းပြောလာတာ၊ ရှင်းတယ်နော်။"
"တက်နေတဲ့ အစိုးရအပေါ်မှာ စော်ကားတဲ့ကောင် တွယ်မှာပဲ၊ ပါးစပ်နဲ့ တွယ်လို့မရရင် အချုပ်ထဲ တည့်မှာဘဲ"
"ကျွန်တော်တို့ ခါးခြားမှာ (ခါးကြားမှာ) သေနတ်ထိုးပြီးတော့ ပုခုံးပေါ်မှာ သေနတ်လွယ်ပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့တာပဲဟာ ဘာမှ မတိုးတက်ဘူးပြော၊ သောက်ရူးတွေ ပြောနေတာ။ ခင်ဗျားတို့ သောက်ရူးတွေပြောတာ မယုံနဲ့။"
"အဲဒီလွှတ်တော်ကြီး ဘယ်သူ ဆောက်ခဲ့သလဲမေး စစ်တပ်က ဆောက်ခဲ့တာ။ အဲဒီမြို့ကြီး ဘယ်သူ တည်ထောင်ခဲ့လဲ စစ်တပ်က တည်ခဲ့တာ။ ဒီလမ်းမကြီး ဘယ်သူဖေါက်ခဲ့သလဲ စစ်တပ်က ဖေါက်ခဲ့တာ၊"
"ကျွန်တော်တို့အစိုးရက ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ မဲနိုင်ပြီး နေရာရလာတာ"
"ခင်ဗျားတို့ ဘုဂလန့် မပြောနဲ့၊ ပြောရင် ခင်ဗျားတို့အတွက် တစ်ပြားမှ လုပ်မပေးဘူး တိုင်ချင်တဲ့နေရာ တိုင်လို့ရတယ်။ ခင်ဗျားတို့ တိုင်ရင်လည်း ကျွန်တော် မရောက်သေးလို့ပါ ပြောလိုက်ရုံပဲ။ ရှင်းတယ်နော်။"
"တန်းစီလှည့်တာလည်း မပြောဘူး၊ ကြိုက်သလောက်လှည့် မကျေနပ်ရင် လဲသေ၊ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတော့ လုပ်ပေးတယ်"
ဦးသန်းရွှေက အုန်းမြင့်ကို အသုံးချပြီး အာရုံလွှဲလိုက်တာပါ ၊ ယူနတီဂျာနယ် က သတင်းတစ်ခုကို ရေဆုံးရေဖျားမလိုက်ပဲ သတင်းတွေကို မှေးမှိန်အောင် အာရုံလွှဲသွားအောင်လုပ်တတ်ပါတယ် ၊ ဦးသန်းရွှေ ဘယ်ပြ ညာရိုက်ပါတော့မယ် သတိထားကြပါ ၊ (နေပြည်တော် အထူးသတင်း) ဦးသန်းရွှေက ဘယ်ပြညာရိုက် အရမ်းတော်ပါတယ် ၊ ဦးသန်းရွှေရဲ့ အကွက်တွေကို စေ့အောင်ကြည့်နိုင်တာ ကျနော်တို့ အဘ ဦးခင်ညွန့်ပဲရှိပါတယ် ၊ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အုပ်စုတွေကို ပြန်မလွှတ်ရဲသေးတာပါ ဟု ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်းတစ်ဦးကပြောကြားသည် ၊ အခုလည်း အုန်းမြင့်ကို အသုံးချပြီး အာရုံလွှဲလိုက်တာပါ ၊ သွေးတိုးစမ်းတာရောလည်း ပါပါတယ် ၊ ဦးသန်းရွှေက အလုပ်တစ်ခုကို အနည်းဆုံး အဓိပ္ပါယ် နှစ်ခုထွက်အောင် လုပ်တတ်ပါတယ် ၊ သူတို့ နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဂျာနယ်တွေကိုလည်း ဂရုတစိုက် သတိထားဖတ်စေလိုပါတယ် ၊ သတင်းတွေကို ပုံဖျက်ပစ်တာ မှေးမှိန်အောင်လုပ်ပစ်တာ ၊ လူတွေရဲ့ ဒေါ်သအရှိန်ကို ဆဲဆိုခိုင်းနှိုင်းတာတွေသုံးပြီး လျှော့ပစ်တတ်တာတွေ အကုန် ဦးသန်းရွှေတိုက်ရိုက်ခိုင်းနေတာပါပဲ ၊ ယူနတီဂျာနယ်ကို နမူနာကြည့်ပါ ၊ ဦးသန်းရွှေ ရဲ့ နျူကလီးယား အစီအစဉ် ဓါတုလက်နက်အစီအစဉ်တွေကို ခရေစေ့တွင်းကျ လိုက်လံဖော်ထုတ်တာမရှိပါဘူး ၊ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ စက်ရုံ အဟောင်းတွေရိုက်ပြပြီး သတင်းတွေကို ဝေဝါးအောင်လုပ်ပစ်တာပဲ များပါတယ် ၊ ဒါတွေက တည်ကြက်တွေပါ ၊ မျက်လှည့်သဘောပြောရင် ဘယ်ပြညာရိုက်ပေါ့ ၊ ယူနတီဂျာနယ်ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ် ၊ ယူနတီလိုတခြားဂျာနယ်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ် ၊ ကဲ အခု ယူနတီဂျာနယ်က အုန်းမြင့်အကြောင်းပါလာတယ်ဆိုတော့ ဒါကို ဘယ်ပြတာလို့မှတ်ယူရင် ညာရိုက်က ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ ၊ သေချာလောက်တာက နေပြည်တော် တစ်နေရာရာမှာ မြောက်ကိုးရီးယားတွေ ဝင်ထွက်သွားလာနေပါပြီ ၊ အဲဒီညာရိုက်ဟာ ဘာဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာ သေသေချာချာ စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ် ၊ အုန်းမြင့်တစ်ယောက်လည်း သနားစရာပါပဲ ၊ စာရွက်ထဲပါတာတွေကို ဖတ်ပြရတဲ့ အဆင့်ပါပဲ ၊ လက်ပံတောင်းတောင်မှာလည်း လယ်တီဆရာတော်ကြီးရဲ့ သိမ်နေရာကို အတုလို့ ပြောထားတာရှိနေပါတယ် ၊ ဦးသန်းရွှေက အုန်းမြင့်ကို ထုတ်ကစားပြီး ပွဲဆူအောင်လုပ်လိုက်တာဟာ အားလုံးရဲ့ အာရုံကို အုန်းမြင့်ဆီရောက်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာဟာ ဘာကို ဖုံးကွယ်ချင်လို့လဲ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကြည့်ရပါမယ် ၊ ကျနော်တိုအ အဘက အားလုံးကို မှာထားပြီးသားပါ ၊ ၂၀၁၅ မှာ ကျနော်တို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ဒီချုပ်ပါတီ အနိုင်ရအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဝိုင်းကူညီရမှာပါ ၊ လက်ရှိအချိန်မှာ ကျနော်တို့ ဘဝတွေက ကျီးလန့်စားစား နေနေရတုန်းပါပဲ ၊ တကယ်ဒီမိုကရေစီရမှသာကျနော်တို့လည်း လွတ်လပ်မှာပါ ၊ ကျနော်တို့လိုပါပဲ ၊ စစ်တပ်က အငြိမ်းစားယူထားတဲ့ အရာရှိတော်တော်များများလည်း အမှန်ကို သိနေကြပါပြီ ၊ မြန်မာပြည်ကို ဦးသန်းရွှေ လက်ခုပ်ထဲက လွတ်စေချင်နေကြပါပြီ ၊ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်းတစ်ဦးမှ ရင်ဖွင့်ပြောကြားသွားခြင်းဖြစ်သည် ၊ နေပြည်တော်သတင်းရပ်ဝန်းမှ ပေးပို့လာသော အထူးသတင်းဖြစ်သည် ၊
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/30/2014
Thugs,Thieves & Crooks behave like Thugs,Thieves & Crooks.
He is justaThug ,Thief & Crook.
စစ်ခွေး အုန်းမြင့် >>>
သေနပ်အားကိုးနဲ့တော့ လက်နက်မရှိတဲ့ လူထုကို ပါးလိုက်ရိုက်ဘို့ ခြိမ်းခြောက် မနေပါနဲ့။
ကြိုက်ရာ လက်နက်တခုယူပြီး တဦးချင်း ပြိုင်တိုက်ရအောင်။ ရန်ကုန်မြို့က ပြည်သူ့ရင်ပြင် ရှေ့ကို ခုလိုဘဲ ကြွေးကြော်ပြီး လာခဲ့ပါ။
သေနပ်အားကိုး၊ အာဏာအားကိုးနဲ့တော့ လက်နက်မရှိတဲ့ လူထုကို ပါးလိုက်ရိုက်ဘို့ ခြိမ်းခြောက် မနေပါနဲ့။
နေမျိုးဝေဟာ လျှောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်
မြန်မာ့ပိုင်နက်ကို အိန္ဒိယကျူးကျော်ဟု နိုင်ငံတော်သမ...
အောက်က ကုလားက ၀င် ၊ အထက်က တရုပ်က သိမ်း
လင်းလင်းနှင့် ချစ်သုဝေတို့၏ မင်္ဂလာညစာစားပွဲ